Ho avy ireo filoham-panjakana maherin’ny 30 : manomboka miditra an-tsehatra ny fiara mifono vy | NewsMada
Ho avy ireo filoham-panjakana maherin’ny 30 : manomboka miditra an-tsehatra ny fiara mifono vy
Nanomboka niatrana, omaly indray ny sasany amin’ireo fiara mifono vy raha efa nisantatra izany ny fametrahana ny sasany amin’izy ireo teny Ivato sy Ambohitsorohita ny asabotsy teo, nahatongavan’ny mpanjaka maraokanina eto amintsika. Handray vahiny sy olobe maneran-tany rahateo isika.
Anisan’ny ahitana azy ireo anoloan’ny vavahadin’ny tobin’ny Bani Ivato. Ny fidirana eo amin’ny vavahadin’ny CCI Ivato, ny sampanana fiolahana etsy Talatamaty ary koa hatrany Anosizato. Voalaza fa maherin’ny 30 ireo fiara mifono vy hahetsika amin’ity indray mandeha ity raha vitsy izany tamin’ny Comesa. Filoham-panjakana maherin’ny 30 rahateo no ho avy eto, manomboka ny zoma izao. « Fepetra manokana ho amin’ny filaminana izao ary efa fanao amin’ny fihaonana an-tampony », hoy ny lehiben’ny CIRGN, ny Jly Rakotomahanina Florens ny herinandro teo raha nanazava ny hetsika ataon’ny mpitandro filaminana, mialoha sy mandritra ary aorian’ny Frankofonia. Notsindriny manokana fa fomba fanao sy fahita any ivelany ny fahitana ny fiara mifono vy miatrana, toy ny natao tamin’ny fivorian’ny Comesa farany teo. Nampitandrina mihitsy aza ny tenany amin’ny filazan’ny sasany fa efa vakoka sy tsy mamely intsony ireo fitaovam-piadiantsika ireo. « Ao ireo milaza hoe efa tranainy, sns… Andramo hahitanao azy kely ! », hoy ny fanazavany
Miteraka lonilony amin’ny vahoaka…
Tsy ny fiara mifono vy ihany anefa fa eo koa ny mpitandro filaminana. Ahitana azy ireo avokoa ireo faritra mena, ny toerana stratejika, ny trano ivahinian’ny vahiny sy ireo hotely ary toeram-pivoriana, ny fotodrafitrasa toy ny lalana… « Efa misy vondron-kery manokana afaka miditra an-tsehatra avy hatrany raha misy ny tampoka », hoy ihany izy.
Ankoatra izany, efa misy ny sampana manokana hiady amin’ny asa fampihorohoroana hiatrana manomboka izao. Manana traikefa sy fahaiza-manao izy ireo, araka ny nambarany. « Manana ny sampam-pitsikilovana isika ary hiara-kiasa amin’ny vahiny amin’izany », hoy izy.
Mivononona amin’ny asa fampihorohoroana
Etsy andaniny, mampiasa alika mpitsongo dia koa eny amin’ny seranam-piaramanidina Ivato. Nafarana manokana ireto alika efatra ireto ary manana fahaizana manokana amin’ny fitsirihana baomba na koa zavatra ahina hipoaka eny amin’ny seranana. Manaraka azy ireo ny mpibaiko miisa telo. Hampiasaina eny amin’ireo toeram-pivoriana koa ireto biby ireto na koa amin’ireo trano ipetrahan’ireo vahiny manan-kaja.
Mandritra izany rehetra izany anefa, mandeha ny asan-dahalo any amin’ny faritra. Mandry tsy lavoloha ny mponina. Anisan’izany ny any Ambatofinandrahana, Bongolava, Atsimo Andrefana, Anosy hatrany Androy. Vao nisehoana fahafatesana manamboninahitra iray sy fokonolona ary dahalo tany Mandoto, distrikan’i Betafo, ny alatsinainy teo. Mivangongo eto an-dRenivohitra amin’ny Frankofonia anefa ny miaramila sy ny fiara mifono vy ary ny alika. Miteraka lonilony sy tsy fahafalian’ny vahoaka ny tahaka izany.